Mohan Shahi, Author at - Page 167 of 251
Home > Mohan Shahi (Page 167)
महाधिवेशनलाई पछाडि धकेलेर कांग्रेसलाई फाइदा छैन्: गगन थापा
Mohan Shahi February 10, 2019 mophosala, special_three, मुख्य खबर, राजनीति	0
गोरखा । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले पार्टी महाधिवेशनलाई पछाडि धकेलेर काङ्ग्रेसलाई फाइदा नहुने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन गोरखाले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता थापाले महाधिवेशनलाई दुई÷अढाइ वर्ष पछाडि धकेल्दा यसले पार्टीलार्ई बलियो नबनाउने भन्दै तत्काल महाधिवेशनको काम शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । ‘काङ्ग्रेसले अधिवेशन पछाडि लैजानुपर्ने कुनै
मोहनसिंह र लक्ष्मी “असहाय” र “टुहुरा”का भगवान बने
Mohan Shahi February 10, 2019 mophosala, मुख्य खबर	0
बैतडी । बैतडीको एक विद्यालयमा सस्वती पुजाको अवसर पारेर अध्ययनरत टुहुरा बालबालिकालाई न्यानो वितरण गरको छ । बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका स्थित रौलेश्वर माविमा अध्ययनरत टुहुरा, विपन्न र असहाय बालबालिकालाई झोला र विद्यालय पोशाक वितरण गरिएको हो । विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी मोहनसिंह मडै र लक्ष्मी मडैले जापानबाट विद्यार्थीहरुका लागि झोला र पोशाक
टुहुरा, विपन्न, असहाय बालबालिकालाई झोला र विद्यालय पोशाक वितरण
बैतडी। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका स्थित रौलेश्वर माविमा अध्ययनरत टुहुरा, विपन्न र असहाय बालबालिकालाई झोला र विद्यालय पोशाक वितरण गरिएको छ । विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी मोहनसिंह मडै र लक्ष्मी मडैले जापानबाट विद्यार्थीहरुका लागि झोला र पोशाक किन्न आर्थिक सहयोग गर्नुभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक किशोर मडैले जानकारी दिनुभयो । विद्यालयमा अध्ययनरत टुहुरा,विपन्न र असहाय विद्यार्थीहरुलाई
१४ एसएसपी र २६ एसपीकाे बढुवाका लागि सिफारिस (सूचीसहित)
Mohan Shahi February 10, 2019 special_three, मुख्य खबर, राजनीति	0
काठमाडौं। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले १४ जना एसएसपी र २६ जना एसपीकाे लागि बढुवाकाे सिफारिस गरेकाे छ। प्रधान कार्यालयको शनिबार बसेको बैठकले जनपद प्रहरी समूहअन्तर्गतको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) का लागि १४ र प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) का लागि २६ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। को–को परे ? हेर्नुहोस् सूचीसहित
सरकारको झुटतन्त्रलाई काँग्रेसले लगाम लगाउनुपर्छ
Mohan Shahi February 10, 2019 February 10, 2019 special_four, मुख्य खबर, राजनीति	0
सत्तारुढ दल नेकपा पछिल्लो समय निकै आलोचित बनेको छ । वाइडवडी प्रकरण होस अथवा निर्मला हत्याकाण्ड लगायत चिकित्सा शिक्षा विधेयक, सुनकाण्ड, एनसेलको कर काण्ड, प्रदेश नं. ५ को ५२ लाख घोटला, भेनेजुएलाको बारेमा जारी वक्तव्य र कर्मचारी समायोजन । यी र यस्तै घट्ना परिघटनामा थुप्रै आलोचना खेप्न बाध्य भएको छ
नेकपामा थप तरंग
Mohan Shahi February 10, 2019 February 10, 2019 special_two, राजनीति	0
काठमाडौँ — नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सुरु द्वन्द्वले पार्टी पूर्ण रूपमा एक भइनसक्दै विभाजन हुनेसम्मको आशंका बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेनेजुएलाका सन्दर्भमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘चिप्लिएको’ टिप्पणी गरेलगत्तै सरकारप्रति खनिएका दाहाललाई शनिबार उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कटाक्ष गरेका छन् । नेता भीम रावलले दुई अध्यक्षबीचको द्वन्द्व समयमै
पञ्चमी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती पुजा आज
Mohan Shahi February 10, 2019 February 10, 2019 special_one, मुख्य खबर, शिक्षा	0
काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्रीपञ्चमी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी आज (आइतबार) देशभर मनाइँदैछ। वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा गरे विद्या बुद्धि बढ्ने विश्वास रहेको छ । आज देशभरका सरस्वती मन्दिरमा पूजा आराधना गर्न श्रद्धालुको भीड लाग्छ। विद्यालय नपठाइएका साना बालबालिकालाई आजकै दिनदेखि अक्षरारम्भ
दुःखद खबरः कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिका प्रमुखकोे निधन
Mohan Shahi February 9, 2019 special_three, देश, मुख्य खबर, राजनीति	0
काठमाडौं । पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर नेम्वाङको निधन भएको छ । शनिबार स्वास्थ्यमा समस्या देखाएपछि उपचारका लागि इलाम लगिएका नेम्बाङको इलाममै मृत्यु भएको हो । वडाले आयोजना गरेको क्षमता विकास तालिम कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा बेहोस भएका उनलाई तत्काल उपचारका लागि इलाम लगिएको थियो । इलामबाट झापातर्फ लैजाने तयारी भैरहेका बेला अध्यक्ष
भीम रावलको चेतावनीः ओली र दाहाल संयमित नभए पार्टी फुट्न सक्छ !
Mohan Shahi February 9, 2019 special_two, मुख्य खबर, राजनीति	0
काठमाडौँ । भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट र त्यसमा अमेरिकी गतिविधिको विषयले नेपाली राजनीतिमा खलबल ल्याएको छ । विशेष गरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र ‘भेनेजुएला काण्ड’ ले ठूलै हलचल ल्याएको छ । अमेरिकाले स्वघोषित अन्तरिम राष्ट्रपति क्आन गुएडोको समर्थन गरेपछि भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदाय विभाजित बनेको छ । यहि बीचमा
सरकारले नराम्रो गर्दैमा अर्को चोटी चुनाव जित्छौँ भन्ने कांग्रेसी शोच गलतः गगन थापा
Mohan Shahi February 9, 2019 special_one, मुख्य खबर, राजनीति	0
गोरखा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले सरकारले रेल र पानीजहाजको सपना देख्नु गलत नभएको बताएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस गोरखाद्वारा पार्टीका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चौथो स्मृति दिवसका अवसरमा सदरमुकाममा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, “कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालमा रेलको सपना देख्नु गलत होइन, पूर्वाधार नभएको देशमा पूर्वाधार
Previous 1 … 166 167 168 … 251 Next
पौडेलको आमरण अनशनप्रति चितवन कांग्रेसको ऐक्यवद्धता यस्ता छन विरोधका कार्यक्रम
Mohan Shahi February 25, 2020 0
चितवन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति चितवनले फागुन १५ गते ‘चितवन बन्द’ को घोषणा गरेको छ। चितवनकै माडी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष एवम् काँग्रेसका स्थानीय नेता कृष्णप...
शासक फेरिए शासनपद्धति फेरिएन; यूवा नेता शाही
जुम्ला । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जुम्लाका संगठन विभाग प्रमुख तथा यूवा नेता लक्ष्मण शाहीले कर्णालीको हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र स्थानीयहरुको सुविधाको लागि जुम्लामा फ्युलि...
Mohan Shahi February 24, 2020 0
तरकारी बेच्न हिडेका नन्दलाल श्रेष्ठको मृत्यु सिन्धुलीस्थित कमलामाई नगरपालिकाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन सोमबार जाँदै गरेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल बाटोबाटै फर्किएका छन्।
विपक्षीले गैरविषयलाई विषय बनाएर जनतामा भ्रम छरे; प्रधानमन्त्री
काठमान्डौ । दुई तिहाईको सरकारका प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई असफल बनाउन विपक्षीहरू लागिपरेको बताएका छन्। नेकपा गण...
Mohan Shahi February 24, 2020 February 24, 2020 0
एजेन्सी मलेसियाका ९४ वर्षीय प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजीनामा दिएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री महाथिरले राजासमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। उनले नेतृत्व गर
पौडेलको आमरण अनशनप्रति चितवन कांग्रेसको ऐक्यवद्धता यस्ता छन विरोधका कार्यक्रम https://t.co/Q8KQy2E7O5
शासक फेरिए शासनपद्धति फेरिएन; यूवा नेता शाही https://t.co/xwPOmyb5fw
जाम छिचोल्न नसकेपछि बाटोबाटै फर्किए उपप्रधानमन्त्री पोखरेल https://t.co/PFofjTbPsd
विपक्षीले गैरविषयलाई विषय बनाएर जनतामा भ्रम छरे; प्रधानमन्त्री https://t.co/NGcgdmAOJX
मलेसियाका ९४ वर्षीय प्रधानमन्त्री महाथिरले दिए राजीनामा https://t.co/uwMz6rxS7k
गजल:-"जितेर पनि कैफियतमा परौंला, त्यो छुट्टै कुरा भो"! https://t.co/jwpLwaql2t
भाग्य कोरीदिने गाँउलाई उपहार https://t.co/4TRkQIm35N